Ikhekhe Amnandi Futhi esheshayo kuso: ikakhulukazi ukupheka, izindlela kanye nokubuyekeza
Namuhla sizokubonisa indlela ukupheka ikhekhe kuso. zokupheka yethu kuzosiza ngokushesha ukupheka up isidlo esimnandi, ukuhlangabezana ngokwanele izivakashi ezingalindelekile futhi kusimangaze isidlo bomdabu yasekuqaleni.
ikhekhe Quick kuso
Indlela ngokushesha ukupheka ukunconywa pie itiye? Sifuna ukwabelana nawe iresiphi inhlama ngendlela engavamile ukupheka. ungakwazi ukushintsha ukugcwaliswa noma sebenzisa omunye ukuthi sincoma, uma uthanda. Ngakho ukwenza ikhekhe ku pan ngaphandle eziko, kuyodingeka:
Hlanganisa inhlama ezine wezipuni ukhilimu omuncu kanye imayonnaise, engeza amaqanda amabili nesishiyagalolunye spoonfuls kafulawa.
Hlukanisa mass okuholela zibe izingxenye ezimbili alinganayo.
Shisisa pan ngaphandle uwoyela, bese ukunciphisa bafudumale. Ngemva kwalokho, babeka isigamu inhlama uhambelane.
Ungabese ukusakaza ukugcwaliswa: lokuqala - ham oqoshiwe ke - izindandatho utamatisi, iminqumo. Yenza anezikhala ezondile isoso, futhi phezu konke ukubeka ungqimba ushizi vukuza.
Mboza pan ne ngesivalo bese upheka enzuzweni kuze kuze ushizi Incibilikile ngokuphelele.
Ngokufanayo, lungiselela pie yesibili.
ikhekhe Sweet kuso
Lungiselela dessert ezisheshayo itiye kungaba yilowo nalowo wesifazane. Futhi le njongo asimdingi imikhiqizo ekhethekile, futhi kungenzeka ukuthi angazenza lezo zinto efrijini. Bhaka ikhekhe elimnandi kuso sisobala:
Izithelo noma amajikijolo oqoshiwe futhi uthele ushukela ukugqamisa ijusi.
amagremu 100 ukhilimu omuncu, uhlanganise amabili wezipuni ushukela, soda kancane, inkukhu neqanda. Hlanganisa kahle futhi ungeze imikhiqizo kuso wezipuni eziyisithupha kafulawa.
ukushisa Good epanini gcoba ke ibhotela. Ngemva kwalokho, babeka inhlama ngokushesha ale ukushisa.
Izithelo noma amajikijolo wring izandla zakhe, wazifaka epanini ukuthosa futhi razravnyayte.
Vala lid nelesitsha bese ukuphela imizuzu engaba ngu-20.
Ngaphambi - omunye iresiphi engajwayelekile namakhekhe okuzenzela. Indlela ukupheka ikhekhe eziphuma kuso? ufunde imiyalelo ngokucophelela bese ngokuphepha phansi ibhizinisi:
Thatha inkukhu imilenze emibili, usike inyama kusukela amathambo baliqume ku cubes ezincane.
onion Hlanza futhi ukunquma, bese gazinga emafutheni nebhotela ingxube.
Uma u-anyanisi uthambile, engeza inyama ukupheka konke ndawonye imizuzu eyishumi.
Eziningana naphakathi amazambane ikhasi sibe yimichilo mncane kakhulu.
Xhuma izithako lelungiselelwe, inkathi nabo ngosawoti kanye pepper kanye isiyaluyalu.
Uxove inhlama komunye inkomishi yogurt noma ukhilimu omuncu, izinkomishi ezintathu ufulawa, amafutha yemifino spoon, spoon ushukela, 50 g we imajarini elicibilikile, amaqanda amabili, isipuni sikasawoti kanye nobungako efanayo of soda, slaked endaweni ziwuthenga ngezipuni of uviniga.
Inhlama eqeda aqambe amanga emakhazeni okungenani isigamu sehora. Khona-ke ukwehlukana kwawo izingxenye ezimbili ukungalingani. Iningi walala phansi pan nezandla bushelelezi.
Okulandelayo, beka ukugxusha epanini alisibekele engxenyeni yesibili yesivivinyo.
Bhaka pie on ukushisa low for isigamu sehora ke ngobumnene vula phezu upheke esilinganayo.
Khonza etafuleni kanye iziphuzo ezishisayo noma ezibandayo.
Pies ne ushizi
Inhlama ngokuba pie kuso okuphekwe ngokushesha okukhulu, futhi umphumela uba soft kakhulu futhi emnene. Indlela ka lokhu baking sisobala:
Thela pan 500 ml i-yogurt, enezele futhi amanye usawoti 50 ml we amafutha sunflower.
Hlukanisa yogurt endishini iqanda, gqoka umlilo bese uqale ibangele.
Lapho inhlama bushelelezi futhi ngokwanele sekuqala ukufudumala, kungaba asuswe isitofu.
Seva kuso ezintathu izinkomishi kafulawa uhlanganise ukudla ekuphambukeni ubebushelezi.
Thela phezu kwetafula izinkomishi ezimbili zikafulawa kanye isipuni baking soda.
Uxove inhlama izandla awugqinsi, ukubuthele ibe ibhola, amboze ithawula bese ushiye imizuzu eyishumi kuphela.
Ukuze ukugcwaliswa, uhlanganise 200 amagremu cottage shizi 200 amagremu of ushizi yashizi amaqanda amabili inkukhu.
Uxove inhlama futhi silivumele "ukuphefumula" cishe ingxenye yesine kwabaneminyaka ihora. Khona-ke ulwahlukanise izingxenye ezine.
Hlukanisa ukugcwaliswa ku inani elifanayo izingxenye.
Thatha inhlama, Roll it ukuze ukushuba workpiece akuyona esingaphansi isentimitha. Ngemva kwalokho walala phezu ungqimba ukugcwaliswa. Imiphetho inhlama maphakathi bese uxhuma Phusha - ikhekhe olandelayo kumele ibukeke esikhwameni ifindo. Ngokufanayo, wenza okufanayo nalo lonke izikhala.
Beka ophaya ezivuzayo phansi etafuleni, futhi emva kwemizuzu emihlanu, baba ugingqe pin rolling usayizi wesithombe sakho pan.
Grill le tortilla phezu emlilweni ophansi kuze brown golden ke flip phezu. amakhekhe Iphele Ihambe simnandi kakhulu, uphinde uzihambise ku etafuleni, awukwazi kuphela kushisa, kodwa abandayo.
Potato Pie "Quick"
Leresiphi kuyokusiza uma izivakashi ezingalindelekile wehle. ezinhle Ikakhulukazi ukupheka ke ehlobo, lapho ukushisa ngakho awufuni ukuxoxa kuhhavini. Recipe of the pie kuso, ungafunda ngezansi:
Hlanza amazambane ezine naphakathi ehlutshiwe bazigcobe on a grater.
Fake usike anyanisi bese iyiphi imifino.
Hlanganisa izithako endishini enkulu uhlanganise.
Ukuze silungiselele inhlama, uhlanganise iqanda elilodwa, iprotheni inkukhu, isipuni kafulawa, usawoti kanye pepper ukunambitha.
I yokugcwalisa okuholela uthele ukugcwaliswa uhlanganise.
Shisisa pan, ukuxubha ke ngamafutha bese ngokucophelela babeka ikhekhe esizayo futhi bushelelezi ngemfoloko.
Lungiselela ikota umkhosi ihora, bese flip phezu. Lo msebenzi elula kunazo ukwenzani plate. Lapho ikhekhe usulungile, ufafaze ushizi vukuza futhi uvale lid. Ngemva kwemizuzu eyishumi ke ukukhonzwa nge itiye noma ikhofi.
Pie ushizi zucchini
Lena awukudla yezinkathi ezithile okuphekiwe ngokushesha okukhulu imikhiqizo kakhulu elula. Lingasebenza kwasemini noma ntambama itiye. Ukubhaka ikhekhe kuso, uzodinga:
A ambalwa zucchini abasha grate lapho sihlala esikhunjeni.
Hlanganisa nabo 250 amagremu kafulawa, usawoti, baking powder kanye 150 amagremu of ushizi shredded.
Endaweni ehlukile, phehla phehla amaqanda amabili, i-usawoti kancane futhi 80 amagremu ibhotela.
Xhuma ukudla okulungiselelwe kanye uzibeke sensimbi ukuthosa epanini. Uma ufuna ukupheka dessert kuhhavini ke kuthuthukiswe ke Mboza isikhumba wokubhaka.
Eyosiwe pie phezu ukushisa low kuze ithenda, bese usivule phezu upheke kuze segolide.
The main gqamisa lokhu ikhekhe okunempilo - esiningi yamathebhu futhi ungqimba ezondile inhlama. Siyaqiniseka ukuthi obathandayo uzokubona lolu isidlo, futhi izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ebuzwa ukulungiselela sona. A sasipheka ngesitofu ikhekhe emganwini oyincence kanje:
Lungiselela 500 amagremu inkukhu kwesibindi - uxubha ke, omile futhi uthathe yizicucu. Ngemva kwalokho, ufafaze ngosawoti kanye nanoma yimuphi izinongo ukunambitha, uthele sauce soy. Hlanganisa ukugxusha esizayo futhi ushiye it marinate isikhashana.
Ngemva kwalokho, lungiselela inhlama. Ngenxa yale njongo ummese nquma eyodwa iphakethe of imajarini ekamelweni lokushisa kanye ufulawa (ngokwanele isigamu inkomishi). Ngaphezu kwalokhu, nezela isigamu efanayo isipuni soda hydrated, usawoti kancane futhi ezintathu wezipuni ukhilimu omuncu. Ngokushesha uxove inhlama behlangana ke ibe ibhola. Bopha in plastic ukugoqa nalutho futhi sikugcine efrijini kuze kuphele isigamu sehora.
Ikhasi bese usike onion esisodwa esikhulu ezinqumela. Ngemva kwalokho-ke Fry emafutheni zemifino kanye isibindi. Uma inyama usulungile, uvala ekushiseni bese ulinda kuze ukugcwaliswa selupholile ngokwanele. Ngemva kwalokho miss isibindi ngokusebenzisa grinder inyama.
onion Ngokwehlukana, gazinga oqoshiwe (amakhanda lemitsatfu nobe lemine).
Lungiselela yokugcwalisa - beat 200 amagremu ukhilimu omuncu kanye ezintathu inkukhu neqanda phehla, bese ufaka kuwo parsley oqoshiwe.
Shisisa pan ne ibhulashi ibhotela. Ngemva kwalokho-ke kufanele kube cool kancane bese zifaka ngisho ungqimba inhlama. Qondanisa amabhampa, bese ukubeka phansi anyanisi okugazingiwe. Ngemva kwakhe, ungqimba olandelayo esibindi, phezu ikhekhe kufanele uthele ethela.
Vala pan ne ngesivalo bese upheka phezu ukushisa low kuze kuze ukugcwaliswa obuswa.
Omuny abanolwazi ngokuvamile zisebenzisa izindlela amakhekhe okusheshayo, kuphekwe epanini. Bathi ngenxa ngale ndlela elula ukuphatha ukupheka uswidi okumnandi izivakashi kanye nezihlobo. ukunambitheka kwabo akuyona okubi kakhulu ukwedlula amakhekhe kuhovini ngibenze elula.
Izithelo kubhasikidi: iresiphi ezithakazelisayo
Asazi khekhe ne cherry ngezindlela ezahlukene
How fast futhi okumnandi ukupheka isitshalo seqanda (blue) e adzhika?
Amazambane Elimnandi futhi okumnandi nge amakhowe multivarka
Ukudweba i inkontileka umshado: ubuqili imithetho, lawo ngamaphuzu ayinhloko esekelwe
Kungakhathaliseki umuthi ngempumelelo "Trykhopol" inkwethu?
Umlando ukuphathwa wacabanga futhi lasungulwa
Amadoda eyimpumelelo: izici, ngezici zobuntu nesitayela
Polnovstraivaemye akhiphe: izinhlobo, izinzuzo, ukufakwa
Ezinye izithombe eziholela ukushintsha umbono ngokuba khona
Kalinkovichi Ifenisha Factory: ukhululekile izinga okusezingeni ifenisha
Upper East Side: ukuhamba eNew York City
UGumilev Lev Nikolaevich: i-biography emfushane
Eye twitches Okufanele Ukwenze? Ukuzola, kuphela ukuthula!
Izimbambo yenkomo: iresiphi e multivarka
Astrology. Scorpio: lucky inombolo